Qarax Ka Dhacay Degmada Diinsoor Ee Gobalka Baay. – Calamada.com
Qarax Ka Dhacay Degmada Diinsoor Ee Gobalka Baay.
calamada November 3, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya degmada Diinsoor ee gobalka Baay ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay gudaha degmadaasi qarax lagula beegsaday maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ee ku sugan degmadaasi.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago waxaa lala beegsaday maleeshiyaat murtadiinta oo goob ku wada qayilayay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa ee qaraxa ayaa sheegaya in tiro askari ah oo ka tirsan murtadiinta dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxa’iyadoona warar hoose ay sheegayaan in labo askari dhaawacyadooda aad u culusyihiin.
Qaraxa ka dhacay degmada Diinsoor ayaa kusoo aadaya xilli qarax maalintii shalay ka dhacay duleedka degmada Ceelwaaq ee gobalka Gedo lagu dilay 12 askari oo Kenyaan ah waxaa sidoo kale qaraxaasi Nasaarada Kenya looga gubay gaari Beebo ah.
Previous: Iska Hor’imaad Khasaara Dhaliyay Oo Caabudwaaq Ka Dhacay.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Radio Andalus 04-02-1438 Hijri.